3 Ndị a bụ mba+ Jehova kwere ka ha nọrọ ka o wee site n’aka ha lee Izrel ule,+ ya bụ, ndị niile na-ahụghị nke ọ bụla n’agha niile a lụrụ na Kenan;+ 2 ọ bụ naanị ka ọgbọ dị iche iche nke ụmụ Izrel wee hụ otú agha na-adị, iji kụziere ha agha, ya bụ, naanị ndị na-ahụtụbeghị ụdị ihe ahụ: 3 Ndị isi ise+ nke ndị Filistia,+ na ndị Kenan niile,+ ọbụna ndị Saịdọn+ na ndị Haịvaịt+ ndị bi n’Ugwu Lebanọn,+ malite n’Ugwu Bel-hemọn+ ruo n’ebe e si abanye Hemat.+ 4 Ha wee bụrụ ndị e ji ele Izrel ule+ iji mara ma hà ga-erube isi n’iwu Jehova nyere ndị nna ha site n’aka Mozis.+ 5 Ụmụ Izrel wee biri n’etiti ndị Kenan,+ ndị Het na ndị Amọraịt na ndị Perizaịt na ndị Haịvaịt na ndị Jibọs.+ 6 Ha wee lụrụ ụmụ ha ndị inyom,+ ha kpọkwaara ụmụ ha ndị inyom kpọnye ụmụ ha ndị ikom,+ ha wee na-efe chi ha dị iche iche.+ 7 Ụmụ Izrel wee mee ihe jọrọ njọ n’anya Jehova, ha chefukwara Jehova Chineke+ ha wee fee Bel+ na ogwe osisi dị nsọ.+ 8 Jehova wee weso Izrel iwe dị ọkụ,+ o wee were ha resi+ Kushan-rishateyim eze Mesopotemia;+ ụmụ Izrel wee na-ejere Kushan-rishateyim ozi ruo afọ asatọ. 9 Ụmụ Izrel wee malite ịkpọku Jehova ka o nyere ha aka.+ Jehova wee nye ụmụ Izrel onye nzọpụta+ ka o wee zọpụta ha, ya bụ, Ọtniel+ nwa Kinaz,+ nwanne Keleb nke nta.+ 10 Mmụọ+ Jehova wee dakwasị ya, o wee ghọọ onyeikpe Izrel. Mgbe ọ pụrụ gaa agha, Jehova nyere Kushan-rishateyim eze Siria n’aka ya nke mere na o meriri+ Kushan-rishateyim. 11 E mesịa, ala ahụ enweghị nsogbu ọzọ ruo afọ iri anọ. N’ikpeazụ, Ọtniel nwa Kinaz nwụrụ. 12 Ụmụ Izrel wee maliteghachi ime ihe jọrọ njọ n’anya Jehova.+ Jehova wee kwe ka Eglọn eze Moab+ dị ike ibuso Izrel agha,+ n’ihi na ha mere ihe jọrọ njọ n’anya Jehova.+ 13 Ọ kpọkọtakwara ụmụ Amọn+ na Amalek+ ibuso ha agha. Ha wee gaa bibie Izrel ma weghara obodo nkwụ ha.+ 14 Ụmụ Izrel wee na-ejere Eglọn eze Moab ozi ruo afọ iri na asatọ.+ 15 Ụmụ Izrel wee malite ịkpọku Jehova ka o nyere ha aka.+ Jehova wee nye ha onye nzọpụta, ya bụ, Ihọd+ nwa Gira, onye ebo Benjamin,+ onye na-eme aka ekpe.+ Ka oge na-aga, ụmụ Izrel bunyere ya ụtụ ha tụrụ ka ọ gaa bunye Eglọn eze Moab. 16 N’oge ahụ, Ihọd rụrụ mma agha nke nwere ihu abụọ,+ ogologo ya dị otu kubit. O wee kegide ya n’apata ụkwụ aka nri ya,+ kpuchie ya uwe ya. 17 O wee butere Eglọn eze Moab+ ụtụ ahụ. Eglọn bụ nwoke buru nnọọ ibu. 18 O wee ruo na mgbe o nyesịrị ya ụtụ ahụ,+ ọ gwara ndị ahụ ji ụtụ ahụ bịa ka ha lawa. 19 Ya onwe ya wee si n’ebe a na-awa nkume na Gilgal laghachi,+ o wee sị: “Eze, ọ dị ihe nzuzo m chọrọ ịgwa gị.” O wee sị: “Cheregodị!” Ndị ahụ niile guzo ya n’akụkụ wee si n’ebe ọ nọ pụọ.+ 20 Ihọd wee bịakwute ya ka ọ nọ ọdụ n’ụlọ ya jụrụ oyi nke dị n’elu ụlọ, nke naanị ya na-anọ. Ihọd wee sị: “Enwere m okwu Chineke nke m ga-achọ ịgwa gị.” O wee bilie n’ocheeze ya. 21 Ihọd wee matịa aka ekpe ya mịrị mma agha ahụ dị n’apata ụkwụ aka nri ya wee manye ya n’afọ. 22 Isi mma ahụ wee soro ihu mma ahụ banye ya n’afọ, nke mere na abụba kpuchiri mma ahụ, n’ihi na ọ mịpụtaghị mma ahụ n’afọ ya, nsị wee si ya n’afọ na-apụta. 23 Ihọd wee si n’oghere ikuku si abata pụọ, wee mechichaa ọnụ ụzọ ụlọ ahụ dị n’elu mgbe ọ pụsịrị, kpọchiekwa ha. 24 Ya onwe ya wee pụọ.+ Ndị na-ejere ya ozi bịara lee anya, ma, lee, a kpọchichara ọnụ ụzọ ụlọ ahụ dị n’elu akpọchi. Ha wee sị: “Ọ na-eje mposi+ n’ọnụ ụlọ jụrụ oyi nke dị n’ime.” 25 Ha wee chegide ya ruo mgbe ihere mewere ha, ma, lee! o nweghị onye na-emeghe ọnụ ụzọ ụlọ ahụ dị n’elu. Ha wee were mkpịsị ugodi meghee ha, ma, lee! nna ha ukwu anwụọla tọgbọrọ n’ala! 26 Ma Ihọd gbara ọsọ mgbe ha ka nọ na-egbu oge, o wee si n’ebe a na-awa nkume+ gafere wee gbaga Si-aịra. 27 O wee ruo na mgbe o rutere ebe ahụ, ọ malitere ịfụ opi+ n’ógbè Ifrem bụ́ ugwu ugwu;+ ụmụ Izrel wee si n’ógbè ahụ bụ́ ugwu ugwu soro ya gbadaa, ya abụrụ onye ndú ha. 28 O wee sị ha: “Soronụ m,+ n’ihi na Jehova enyefewo ndị iro unu, bụ́ ndị Moab, n’aka unu.”+ Ha wee soro ya gaa weghara ebe ndị a na-eji ụkwụ agafe+ osimiri Jọdan ka ha wee nọchiere ndị Moab ụzọ, ha ekweghịkwa ka onye ọ bụla gafere. 29 N’oge ahụ, ha gburu ndị Moab, ihe dị ka puku ndị ikom iri,+ onye ọ bụla nke gbasiri ike,+ onye ọ bụla nke bụkwa dike; ọ dịghị otu onye n’ime ha gbapụrụnụ.+ 30 Izrel wee merie Moab n’ụbọchị ahụ; ala ahụ enweghịkwa nsogbu ọzọ ruo afọ iri asatọ.+ 31 Mgbe ọ nwụrụ, e nwere Shamga+ nwa Enat, o wee jiri ndụdụ e ji achị ehi gbuo ndị Filistia,+ narị ndị ikom isii; ya onwe ya kwa zọpụtara Izrel.+